imanoela fifaliana · Jona 2019 · Global Voices teny Malagasy
imanoela fifaliana · Jona, 2019
Lahatsoratra farany an'i imanoela fifaliana tamin'ny Jona, 2019
Belarosia: Hatsikana Ara-politika
Eoropa Afovoany & Atsinanana 30 Jona 2019
Mbola tohizan'ireo blaogera taorian'ny vanimpotoana Sovietika ny fomba fanao sovietika taloha ela be, dia ny fiatrehana ny zava-misy sy ny fanehoana ny fisintahany amin'ny alalan'ny hanihany politika. Ahitana ireo sombina hatsikana maro mikasika ny politika Belarosiana ity lahatsoratra ity.
Vatakely feno torohevitra ho an'ireo Mpandika teny
Mediam-bahoaka 30 Jona 2019
Ato amin'ity pejy ity, ataonay lisitra ireo fitaovana sy loharano maro maimaimpoana izay afaka ampiasain'ny vondrompiarahamonina Lingua ho an'ny Global Voices no sady ho an'ny fanatsaràna ny asan'ny tena ihany koa.
Blaogim-Piarahamonina GV 30 Jona 2019
Manazava ny fotoana hahafahan'ny tranonkala Lingua iray mamoaka votoaty tokana sy ny politika mikasika izany ity pejy ity. Ny hampirotsahana kokoa ireo teny eny an-toerana ao anatin'ny sehatry ny haino aman-jerin'olontsotra sy ireo mpamaky no hevitra ambadik'izany. Mba jereo ny ambin'ireo Torolalana Lingua an'ny Global Voices-ntsika.
Global Voices Radio SA Radio Global Voices
Mediam-bahoaka 29 Jona 2019
Ampio izahay hisafidy ny famantarana ny tetikasa onjampeo anaty Aterineto izay natomboky ny Global Voices
Blaogim-Piarahamonina GV 29 Jona 2019
Torolalana isankarazany momba ny Lingua
Manazava ny fomba ifandaminantsika, ifampifaneraserantsika, ary manolotra ireo politikantsika amin'ny resaka fitsipika sy taridlana mba hifamalian'ny asantsika ity fizaràna ity
Twitter @ActLenguas 2019
Mpiara-miombona antoka amin'ny Taona Iraisam-pirenena Ho an'ny Tenim-pirenena Teratany 2019 -n'ny Firenena Mikambana ny Rising Voices.
Mitondra ny fampiasana bisikileta amin'ny haavony vaovao ny ‘Bike Man’ ao Trinidad & Tobago
Karaiba 29 Jona 2019
Tian'i Trinidad sy Tobago ireo "haavony" -- ary tsy mandiso fanantenana ilay mpitaingina bisikileta vita tanana izay nahatratra ny 3-4 metatra.
Fantaro ny tarehy tsy dia matotra loatra an'i Ahmed Jedou avy any Maoritania
Hafanam-po 27 Jona 2019
Mety ho mpikatroka matanjaka sy mpandala resy lahatra ny demokrasia ao amin'ny fireneny i Ahmed: Maoritania izay tena maha-Masoivoho tsara azy eto anivon'ny GV. Ivelan'izany rehetra izany, manana kalitao hafa izany afaka jerenao ao anatin'ity lahatsoratra ity i Ahmed. Mamakia finaritra !